IiNkampani zeTekhnoloji zeFlyover eziShushu ezingama-20 kwiNkomfa yezeMpilo yeJPM ka-2020 - Ezintsha
Eyona Ezintsha IFlannel nguMnyama oMnyama kwiNkomfa yoKhathalelo lwezeMpilo yeJP
IFlannel nguMnyama oMnyama kwiNkomfa yoKhathalelo lwezeMpilo yeJP
INkomfa yezeMpilo yeJP Morgan iye yazibeka endaweni yayo ingekuko eyokuqala kuphela, kodwa mhlawumbi sesona siganeko sibaluleke kakhulu kwinkomfa yekhalenda yokhathalelo lwempilo kwihlabathi.Ukuhamba
NgoMvulo, nge-13 kaJanuwari, njengebubu leenyosi zobusi, amawaka oosomashishini bezobuchwephesha kwezempilo, abaphathi bezempilo, oongxowankulu bezentengiselwano, oobhanki, abalawuli kunye nemithombo yeendaba zeshishini baya kuhla baya edolophini iSan Francisco njenge Ingqungquthela yama-38 yonyaka kaJP Morgan Healthcare iyaqhubeka. Kwaye, njengoko kunjalo nakweyiphi na indibano yemihla ngemihla yokuqokelelwa kwexabiso ityuwa yayo, yonke indalo yeziganeko zesatellite iye yavela malunga nomtsalane ophambili, odale isekethe ebonakala ngathi ayinasiphelo yeziganeko zonxibelelwano, iintlanganiso kunye nezinye ii-shindigs ezinxulumene nokhathalelo lwempilo. -Zonke zibonelela ngezizathu ezaneleyo zokubeka phantsi ii-lattes emini kwaye ziphose isibhamu okanye ezimbini ebusuku.
Nangona bembalwa kuphela abantu abamenyiweyo ukuba beze kwinqanaba eliphambili, ukumakisha ubukho e-JP Morgan kubaluleke kakhulu, njengoko indibano yeentsuku ezine izibeke njengeyokuqala, kodwa mhlawumbi sesona siganeko sibalulekileyo kwezempilo ikhalenda yenkomfa.
BONA KWAKHO: Inqaku libhala kwakhona i-Playbook malunga nendlela eziCwangciswe ngayo ezeMpilo kuwe
Phambi kwendibano yonyaka ophelileyo yeJP Morgan, uMqwalaseli wayephakathi kwabokuqala ukubonisa imeko eyaqala ukuvela kwishishini lezempilo-ukonyuka komdla kubo bobabini abadlali bezempilo, kunye nongxowankulu abalambayo, kwezemidlalo ezivela kwizixeko ezingaqhelekanga kunxulumene nenkcubeko yokuqalisa, iindawo ezinje ngeMinneapolis, iNashville kunye neChicago. Umjongi waqulunqa igama elitsha lokuphazamiseka kwabakuMbindi Merika: Itekhnoloji yeFlyover .
Kwaye, ngokugweba nge-buzz yangaphambi kwenkomfa, ngazo zonke iiakhawunti, kulo nyaka uphelileyo yayingengobukrelekrele; Ungeniso oluninzi oluvela kuluhlu lwango-2019 luvele njengabona badlali babalulekileyo nababalulekileyo kumacandelo abo kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Abanye babo bade bakrola ii-niches ezintsha ngokupheleleyo ngaphakathi kononophelo lwempilo olukhulu olwalungekho kunyaka ophelileyo.
Njengabanye ababukeleyo benolwazi ngendawo yezobuchwephesha obhabha phezulu, iFlannel nguMnyama oMtsha, xa kusenziwa into entsha kukhathalelo lwempilo kunye nokubheja okukhulu kubuchwephesha bezempilo.
Thatha umzekelo Bopha , Isicwangciso sezempilo sokuqalisa esisekwe eMinneapolis esele siphakamise umhlathi esiwisa $ 82 yezigidi. Emva kokuhlala kwindawo ephezulu yonyaka ophelileyo kuluhlu lokukwazi kwayo ukusebenzisa isayensi yedatha kunye nobukrelekrele bokuzenzela (AI) ukuhlalutya idatha yamabango esele ikho, uBopha wayenonyaka wesibhengezo. Inkampani iyazandisa iinkonzo zayo kwiindawo ezininzi ezintsha zokugubungela, ngelixa ixhobisa abathengi ukuba baqonde ukuba bahlawulela ntoni ngenene ngezicwangciso zabo zezempilo, ezenza kube lula ukuthelekisa iindlela zonyango, amaxabiso kunye nomgangatho. Dibanisa, kunye nabanye abantu baseMinnesota nge-inshurensi yezempilo yokuqalisa Impilo eqaqambileyo -Esandula ukubhengeza ukuvalwa kwe I-635 yezigidi zeedola kuhlelo-mali lwe-D ngoDisemba, ngaphezulu kwe-400 yezigidi zeedola zenkxaso-mali kwimijikelo engaphambili (ukubeka ingqokelela yayo iyonke ngoku ngaphezulu kweebhiliyoni zeedola) -ukhuphe iminikelo emitsha ngokupheleleyo kwi-inshurensi yezempilo, icandelo elalingaphantsi kweminyaka elishumi eyadlulayo. ithathwa njengengangenakudlula ngenxa yezixhobo ezininzi ezifunekayo zokulinganisa ishishini lolo hlobo. I-Bind esekwe eMinneapolis yayingu- # 1 kuluhlu lwonyaka ophelileyo lweenkampani ezishushu kakhulu kubuchwephesha beflaya. I-2019 yayingunyaka wesibhengezo njengoko inkampani iqhubeka nokukhula kunye nokwanda kwiindidi zemveliso ezintsha.Ngobubele bukaBopha
Kusandothusa inani labatyali mali abangakhange balisebenzise ngokupheleleyo i-'floverover tech 'yendalo, waqaphela uJodi Hubler, umlawuli olawulayo Amashishini e-Lemhi , inkampani eqhuba imali ebeka imali ikakhulu kwiinkampani zempilo ezisekuqaleni ukuya kwinqanaba eliphakathi kwimimandla eseMidwest naseRocky Mountain. Iindawo ezininzi eMbindi Merika ngenene ngamaziko obuchule kunye nolwazi olunzulu lwedomeyini kungekuphela kukhathalelo lwempilo, kodwa nakwisixhobo se-medtech kunye neenkonzo ngokunjalo, wongeze uHubler, ebhekisa kubadlali abakhulu kwezempilo kunye ne-medtech, njenge-UnitedHealth Group, Medtronic, Cardinal Ezempilo, iHumana kunye ne-Anthem-zonke ezo zinesiseko esiphambili sokusebenza phakathi konxweme.
Ingqondo yezoqoqosho-idola nganye yenkunzi iya phambili kwezi ndawo, kwaye ukufikelela kwiitalente ezivela kubaphuhlisi ukuya kumalungu ebhodi kuza namava ahlukeneyo nolwazi, uHubler uxelele uMbonisi. Kwiindawo ezinje nge-Midwest, abantu abadlala kwezempilo, bayiphile… loo mava kunye ne-intuition ibaluleke kakhulu.
Omnye ophumeleleyo kuluhlu lwonyaka ophelileyo waye-Nashville-based SmileDirectClub , Isiqalo se-tele-dentistry esivelisa ngokuthe ngqo-ukuya-kubathengi i-3D-eprintiweyo yokulungelelanisa okucacileyo. Ngo-Septemba, ukuqala kokulungisa amazinyo kwahamba esidlangalaleni, kuphakama ngaphezulu kwe-1.3 yezigidigidi zeedola kwintengiso yokuqala yezigidi zeedola ezili-10, ngaphezulu kwamaxesha amathathu amaxabiso abucala abucala. Kwaye nangona ixabiso lesitokhwe sele lisusele umva ezinye zeenzuzo ze-IPO ezinobunzima, ngomnye umzekelo oqaqambileyo webali lempumelelo lobuchwephesha beflaya.
I-Flyover Tech ngoku 'yiBheji yeNtlonipho' kwiTekhnoloji yezeMpilo
Ukulungiselela ukhathalelo lwempilo olusisiseko kunye nomsunguli waseSan Francisco Uhlalutyo lweRoam UAlex Turkeltaub, kukho igolide emayimbiwe kuMbindi Merika. Iihubhu ezinje ngeRaleigh, iColumbus kunye neNashville, ukubala nje ezimbalwa, ziyaziwa ngokukhawuleza njengamaziko amnandi ezinto ezintsha kukhathalelo lwempilo. Ngobuchwephesha obomeleleyo belifa kunye neenkqubo zokhathalelo lwempilo, kuyindalo nje ukuba ezi nkqubo zendalo ziya kunika amandla isizukulwane esilandelayo sabaphazamisi kwimpilo yedijithali, uqaphele iTurkeltaub, esandula ukuphuma njenge-CEO yeRoam kwaye iseta ingxowa-mali yephulo egxile ekunqamlezweni ye-AI kunye nokhathalelo lwempilo. Ingxowa-mali izakujonga ukwenza utyalo-mali ngobuchule kwiindawo ezinkulu zobuchwephesha kwezempilo kwilizwe liphela, kunye nakwiimarike ezikhulayo zaphesheya kwezilwandle njengeBrazil.
Igama elithi 'flyover' beliqhele ukuba yinto ethob 'isidima, kodwa ngoku libheji yentlonipho kubuchwephesha bezempilo. Oosomashishini embindini welizwe bayazi ukuba itekhnoloji ayinakubakho ngenxa yayo; Kufuneka idityaniswe neemodeli zeshishini ezisebenzayo ukuhambisa ixabiso lokwenyani kwizigulana nakubatyali mali ngokufanayo, yongeze iTurkeltaub. Naluphina ukhathalelo lwempilo olunzulu lwe-VC olungahambeli rhoqo ngenyanga kwiindawo ezinjengeMinneapolis okanye iChicago lilahlekile ngokupheleleyo kwisikhephe.
IChicago, iNashville kunye neMinneapolis ziyavela njengeNew 'Silicon Valleys' yeTekhnoloji yezeMpilo
Nangona kukho amangeno kuluhlu lwalo nyaka kuluhlu olubanzi lweedolophu kwilizwe liphela, iingcali kunye nabangaphakathi baphindaphinda ukukhomba ekuhluthweni kweenkampani ezivela kwiindawo ezintathu eziphambili zezinto ezintsha kwezonyango ezivela kuMbindi Merika: eNashville, eChicago naseTwin Cities IMinneapolis kunye neSt.
Ngoluhlu olwahlukeneyo lweenkampani zelifa eliyintloko ezingena kulo lonke ukhathalelo lwempilo, iihabhu zengingqi ezinjengeNashville, iChicago neMinneapolis ziya kuqhubeka nokuvelisa izinto eziphambili ezikhokelela kushishino kunye neenguqu kwicandelo. Ezi zizindawo zokutshisa ezitsha kukhathalelo lwempilo, waphawula uSara Ratner, igqala kwezamayeza kwezonyango elingaphakathi nelisesinye sezona ngcali ziphambili kwisizwe ezisebenza ngurhulumente iinkqubo zeMedicare neMedicaid.
Umqwalaseli uthethe neengcali zokhathalelo lwempilo ezivela phesheya kwe-US ukubonelela ngeengcinga zabo malunga neyona mikhwa mikhulu ivelayo kwiNkomfa yezeMpilo ye-JP ye-2020 kunye necandelo eliqhubekayo lomdla kwi-flyover tech. Bacelwe ukuba babonise ezinye zeenkampani ezishushu kakhulu phakathi kwamanxweme amabini aza kulandwa eSan Francisco kule veki. Njengonyaka ophelileyo, uluhlu lwangoku alukho kudidi ngokwesiqhelo-iinkampani ezichongiweyo zikumanqanaba ahlukeneyo ophuhliso kunye nokukhula kwaye, ubukhulu becala, zibekwe kwiindawo ezingakhuphisaniyo; Endaweni yoko, uluhlu luluhlu lwemifanekiso engama-20 yokuqala ukuya kwinqanaba eliphakathi eliye labamba umdla wabanonopheli bezempilo abavela kwihlabathi liphela kwaye banento enye efanayo: bonke bayasichitha kwizinto ezininzi ezinokuthi zichazwe yiNew Yorker njenge 'flyover' ilizwe. ' Kulo nyaka, iSilicon Valley yabelana ngokubonakalayo neziqalo zobuchwephesha kwezempilo ezivela kwilizwe liphela. 'I-Flyover tech' ibhabha phezulu kwiNkomfa yezeMpilo ye-JP ye2020.Unsplash / Jesse Orrico
Kwaye ngoku, nazi iinkampani ezingama-20 ezishushu kakhulu kwi-'Flyover Tech 'kwiNgqungquthela yezeMpilo ye-JP ye-2020.
1. Imbali yeSonics (UAnn Arbor, eMichigan); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 87 yezigidi
Unyango lomhlaza olungafunekiyo. Ngokusebenzisa itekhnoloji efanayo ne-ultrasound, olu nyango lonyango lutsha luya kuguqula phantse zonke iindlela zokufunyanwa komhlaza kunye nokupheliswa. Ngandlela thile, imveliso yeflegi yenkampani ayifani ne umatshini wokuphilisa -Itheknoloji iphambili kwisiqwenga somdlalo wethamsanqa kaMat Damon ka-2013 Elysium setha iminyaka eli-134 kwixesha elizayo. I-HistoSonics iphuhlisa itekhnoloji entsha yokulwa umhlaza eya kuthi inyuse i-oncology yanamhlanje.Ngokunyanisekileyo kwe-HistoSonics
Ngokukhokelwa ngumlawuli wezempilo ongumakadebona uMike Blue, iqonga leerobhothi lenkampani elinganyangekiyo kunye nonyango lwe-sonic beam lukulindele ukucocwa okupheleleyo kwe-FDA, kodwa inkampani sele ibhengeze i-reams yokuthembisa idatha entsha yeklinikhi kunye ne-preclinical, kubandakanya ulingo lomntu oluyimpumelelo eSpain. Nge-Epreli yonyaka ophelileyo, i-HistoSonics yavala i-54 yezigidi zeedola C-Round ekhokelwa ngu Iinkqubo zeVarian Medical, Inc. ., inkokeli yehlabathi kunyango lwe-radiation kunye nezisombululo ze-oncology, kwaye zibandakanyiwe Ukutsha kukaJohnson noJohnson kwaye i Imeko yeBhodi yoTyalo-mali yaseWisconsin , phakathi kwabanye. Ekuqaleni kujoliswe kumhlaza wesibindi kunye nomhlaza wepancreatic, i-HistoSonics 'Unyango lwe-Sonic Therapy (RASTSM) oludibeneyo ludibanisa iirobhothi eziphambili kunye nokucinga ngobuchwephesha bokubona ubuchwephesha ukuhambisa unyango olwenzelwe wena ngokuchaneka okungafaniyo nolawulo. Ngokwemigaqo ye-layman, itekhnoloji isebenzisa amandla esandi ukuvelisa uxinzelelo olomeleleyo ngokwaneleyo ukuba lutyise kwaye lutshabalalise ngokupheleleyo izicubu ekujoliswe kuzo kumanqanaba eselfowuni.
Okwangoku, i-HistoSonics ixakekile yakha i-HQ entsha kwidolophu yaseMinneapolis. Itekhnoloji yethu yazalelwa kwiilebhu zeDyunivesithi yaseMichigan, kodwa sakhawuleza saqonda ukuba kufuneka sibesezintweni zokukhathalela impilo, yiyo loo nto ke sigqibe kwelokuba sihambise isiseko sethu siye eMinnesota, ucacisile uBlue. Kulapho zonke iintshukumo zilungile ngoku kubuchwephesha bezempilo.
Mbini. Umnquma AI (EColumbus, eOhio); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 72.8 yezigidi
Ngaphezulu kwesinye trillion Iidola zichithwa minyaka le e-US kulawulo lonyango. Hayi koogqirha, iinaliti, iimeds okanye ii-IVs, kodwa kwiipeni, iphepha, i-IT kunye nento ebizwa ngokuba 'kukudityaniswa kwenkqubo.' Yinto enkulu-kwaye inyani yokuba inkcitho eninzi inokujoliswa ngcono ekunyangeni abaguli nasekusindiseni ubomi yile nto yenza amandla okuqhuba ukuqala kweOlive AI esekwe eOhio.
Ubusuku bobusuku (IMinneapolis, eMinnesota); Inkunzi Ephakanyisiweyo: Ayichazwanga
I-NightWare eyimfihlo kakhulu yayikuluhlu olushushu lwangonyaka ophelileyo, kwaye ngelixa ingekachazi iitotali zayo zokunyusa ingxowa (enye yeenzuzo zokungakhulisi nabatyali mali beziko), inkampani iyaqhubeka nokwenza amanyathelo amakhulu kunyango lwe-PTSD kunye nokuphazamiseka kobusuku, imeko echaphazela ngaphezulu kwezigidi ezihlanu zaseMelika kunye namakhulu amawaka eevets zaseMelika. Kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, i-NightWare ifumene ukutyunjwa ngokusemthethweni kwe-FDA, enikwa kuphela kunyango oluthi, ngokwe-FDA, lubonakalise ukuphucuka okukhulu kwindawo yokugqibela ekliniki ngaphezulu kwezonyango ezikhoyo. NgesiNgesi esicacileyo, i-NightWare inokuba yinto yokuqala yokunyanga yedijithali yeempawu eziphambili ze-PTSD. Yinto enkulu eza kwiApple Watch kufutshane nawe. Umsunguli we-NightWare kunye ne-CEO u-Grady Hannah kunye nomongameli u-Thomas Burke bayadibana ukuzisa unyango lwedijithali lokuqala lwe-PTSD kwindawo yentengiso.Ngokunyanisekileyo kwe-NightWare
Zine. Amehlo (I-Eden Prairie, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 9 yezigidi
Iprojekti yokuphinda uqalise kwakhona kwe-Apple kunye nolawulo lokugqibela lweemarike kubuchwephesha babathengi, iminyaka engaphambi kwe-iPhone, yenze umboniseli wobuchwephesha uGene Munster into ye-oracle eWall Street. Ngoku iqabane elisekayo kwi-VC ejolise kubuchwephesha Iingcuka zeWolf , UMunster uye waba ngumdlalo oqhelekileyo kwisekethe yeendaba zeshishini njengoko esabelana ngeshushu ngokuthatha iTesla, iApple, iAmazon kunye nomzi mveliso weetekhnoloji ngokubanzi. UMunster uyakholelwa Amehlo Inkampani egcinwe ngasese eqhubela phambili abathengi ngetekhnoloji yayo yokukhusela ukukhanya, iye yaba ngumdlali onempembelelo, ekwakheni imigangatho yokukhusela amehlo abasebenzisi kwindawo ebonakalayo, nangona ingabonakali, iluhlaza okwesibhakabhaka ethi iHarvard Medical School ithi unecala elimnyama .
Andinasabelo sezemali ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo e-Eyesafe, walumkisa uMunster. Kodwa iimveliso ezinje ngeDell, i-HP kunye neLenovo ziya ziqonda ngakumbi iingozi zempilo ezibangelwa kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. I-Eyesafe ihleli phezulu kuluhlu olufutshane kakhulu lwezisombululo ezithi iinkampani ezinkulu zobuchwephesha zijike kuzo zincedise ekuyileni nasekusebenziseni imiboniso ekhuselekileyo egcina ukusebenza kombala. Ngelixa likhulayo namhlanje, intengiso ye-Eyesafe yexesha elide ibalulekile, inikezwe ukuba ekuhambeni kwexesha, uhlobo oluthile lokukhuselwa kokukhanya okuluhlaza kuya kugunyaziswa kuyo yonke imiboniso. I-Eyesafe iye yaba ngumgangatho wegolide wecandelo lekhompyutha elenziwa ngokhuseleko lokukhanya kunye nolawulo.Ngokunyanisekileyo kwe-Eyesafe
Ngapha koko, i-Eyesafe sele isike isivumelwano esinomtsalaneUDellkunye nenkokeli yokukhusela isikrini emva komakethiZAGG,isasazwe kwiiVerizon, i-AT & T kunye neevenkile zeT-Mobile kwilizwe liphela, kunye neyona nto iphambili ekuboneleleni ngayo kumzi mveliso we-elektroniki. Kwaye ngokuhamba kukaRhulumente waseCalifornia kutshanje Isigqibo sokuKhanya okuBlue , kubonakala ngathi uqikelelo lukaMunster lommiselo lwenzeka ngokukhawuleza, lubeka i-Eyesafe kwindawo ephucukileyo yokuba ngumnini wentengiso yokukhanya eluhlaza okwesibhakabhaka kwaye, kwinkqubo, bamba ingubo njenge Intel Ngaphakathi yezempilo kunye nokukhuseleka kubathengi be-elektroniki.
5. MyMeds (IMinneapolis, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 8 yezigidi
Ugqirha wakho ukumisela amayeza athile kwaye akuxelele ukuba uwathabathe kwikhemesti yalapho. Nje ukuba ubonakale kwiDuane Reade okanye kwiCVS, umntu okhangeleka enxibe ilokhwe emhlophe unika umbono omfutshane ngesikhongozeli sepilisi esimibalabala, udibanisa igama okanye iingcebiso ezimbini emva koko ubeke iyeza lakho kwingxowa emhlophe, Kunye nephepha eloyikisayo elizele kukuprintwa okuhle, likuthumela ukuba uhambe. Ngoku, uwedwa; nguwe nje, iipilisi ezilishumi elinambini okanye ezingaphezulu, kunye nephetshana elibhalwe ligqwetha elaya kwisikolo sezonyango, okanye ngenye indlela.
Isandi esiqhelekileyo? Amava amayeza anamhlanje aphukile, kwaye imeko yonyango yokunganyanzelisi ukuvela njengeyona ngxaki inkulu yokuqhubela phambili iindleko zokhathalelo lwempilo kwicandelo lonke, i-MyMed izisa kwintengiso yesisombululo esingafaniyo nesinye kwimpilo yedijithali.
Siphinda sichaze amava amayeza ukuze abantu bangabi bodwa kwaye bahlala benokufikelela kwiidatha zabo, utshilo umsunguli we-MyMeds kunye ne-CEO uGqirha Rajiv Shah, inkampani yakhe isandula kukhethwa ukuba ijoyine. Inkqubo yesantya ye-SAP edumileyo kwisiXeko saseNew York . Amava ethu oMenzi weDijithali yaBantu aMalungelo obunikazi yi-ecosystem edibanisa izigulana, abagcini babanonopheli, ababoneleli kunye nabahlawuli ngexesha langempela. Ukuthetha ngokucacileyo, i-MyMeds ye-Shah ibeka umbhobho odibanisa ugqirha, usokhemesti, wena kunye ne-inshurensi yakho yezempilo ngeendlela ezingazange zenzeke ngaphambili, iindleko zokonga kunye nokuqinisekisa iziphumo ezingcono zempilo.
Iingcali zeMboniso zithethile zikholelwa ukuba i-2020 iya kuba ngunyaka wokuqhekeka kweMyMeds, njengoko ikhupha ukudityaniswa kwayo neSAP, isungula imveliso entsha yexesha lokwenyani leMedicare Stars kwaye ityhila into ekulindelwe kakhulu iMyMeds Connect ™. Injini yoqhagamshelo lwedatha-utshintsho lomdlalo wokwenene ekukhanyeni kugxilwe nguWashington kumalungelo edatha yamayeza. Ngokomhlalutyi woShishino lweFox u-Ethan Bearman, olandela iyeza elinamayeza elinganyanzelekanga, iMyMed inamandla okuba yinkampani yeebhiliyoni kule minyaka izayo.
Ezinye iinkampani zempilo zikrelekrele ngenene ngobuchwephesha okanye ngemodeli yeshishini, ngelixa ezinye zinethamsanqa elicacileyo lokuba imeko yolawulo iyajika kwicala labo ngexesha elifanelekileyo, uBearman uxelele uMbonisi. I-MyMeds zombini ihlakaniphile kwaye inethamsanqa, yiyo loo nto ingothusi ukuba uGqirha Raj uyakwazi ukumilisela eyakhe inguqulelo yeTres Comas Tequila ngamanye amaxesha kule minyaka imbalwa izayo.
6. Hlanganisa kwakhona + ukujonga (EChicago, eIllinois); Inkunzi iphakanyisiwe: I-19 yezigidi zeedola + engabhalwanga yi-Private Equity Backing
Ngelixa kunokuba yinto engaqhelekanga kwiinkampani ezimbini ukuba zithiwe endaweni enye, a ukudityaniswa kwamva nje phakathi kweRegroup Telehealth kunye ne-InSight Telepsychiatry kufanele ukubonwa. Ezi nkampani zimbini zidityanisiwe ngasekupheleni kwe2019, kwaye inkampani edibeneyo ngoku ipakisha ubushushu obuninzi, iyenza ukuba ibe yenye yezona zinkulu kunye nezona zibanzi zabanikezeli beenkonzo ze-telepsychiatry e-US Eli ziko litsha lijongana nokungafani kukhathalelo lwempilo yengqondo. yeenkonzo zomntu ngamnye zempilo
Amaxesha amaninzi, ukubekwa ngokwendawo, ngokwezoqoqosho okanye ngokwasentlalweni kuthetha ukuba izigulana ezinemicimbi yezempilo yengqondo azinakho ukufikelela kukhathalelo lwempilo yengqondo abayifunayo. I-Regroup + Insight idibanisa izigulana ukusuka kwelinye icala lelizwe ukuya koogqirha kunye neengcali ekufuneka bezibonile, nokuba bahlala phi na. Ngombhobho wedatha yesikhundla esiphakamileyo ukusuka kwindawo yoogqirha ukuya kuseto lweklinikhi, iRegroup + Insight tie-up yenza ukuba oogqirha banyange, babonisane kwaye banike amayeza kude kwaye balungelelanise ukude neqela lenkxaso yezempilo yesigulana.
Njengezinye iinkampani ezininzi kuludwe lwalo nyaka kunye nolonyaka ophelileyo, uRegroup wazalelwa ngaphakathi kweChicago's Health Incubator, Imicimbi , eye yavela njengendawo yokuzalela ezinye zeenkampani ezinobuchule kunye nokukhula ngokukhawuleza kwimpilo yedijithali. Ngoku zonke ii-C-Suite zabo ekufuneka bezenzile ziza negama leziko elitsha elidibeneyo.
7. Revel Health (IMinneapolis, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 17 yezigidi
Revel Health ibhala kwakhona incwadi yokudlala malunga nendlela izicwangciso zempilo ezithetha ngayo namalungu abo. Zihambile iintsuku ze-robocall enelizwi elizwakala linomdla kakhulu ekukhumbuza ukuba lixesha lolunye uvavanyo lweprostate okanye ileta yefom ethunyelweyo ekhangeleka ngathi sisaziso sokuphicothwa kwi-IRS esikukhumbuza ukuba lixesha lokudubula umkhuhlane.
Owlet (Lehi, Utah); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 48 yezigidi
Mhlawumbi ayisiyonto eyenzekileyo ukuba i-Utah-based Owlet Baby Care iqalwe kwakule meko inye ubukhulu obukhulu bendlu e-US Okanye mhlawumbi iqela lase-Owlet liyazi nje ukuba kunzima kangakanani ukukhulisa umntwana, kungaphantsi kwesibini okanye isithathu, yiyo loo nto bebheja kakhulu ukuba abazali abakhusela ngaphezulu bafuna ngaphezulu kwekham ye-nanny elula ukugcina iso abantwana.
I-Owlet ifumana ukubambeka ngeseti yemveliso ebonelela abazali nge-real-time, ividiyo engangenisiyo kunye nokujonga isandi, ukuvumela inqanaba leoksijini yegazi lomntwana, ukubetha kwentliziyo, ubushushu kunye neepateni zokulala ukuba zibekwe iliso kwaye zilandelwe yinkqubo efikeleleka ngokulula nayiphi na i-smartphone yomzali oxhalabileyo.Eyilwe liqela labazali abanomdla kwi-2013, le nkampani yeSilicon Slopes ithatha umdlalo wokubeka esweni umntwana kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo kwaye abatyali mali bayayithanda. Ikhithi yokujonga ukukhulelwa kwe-Owlet iguqula indlela abazali abalandelela ngayo impilo yabantwana babo.Ngokunyanisekileyo kwe-Owlet
Intsha entsha yenkampani, i-Owlet Band Pregnancy Monitor, isendleleni yokuba iyona mveliso iyona nto ibaluleke kakhulu kwi-tech-care care kulo nyaka, sele sele iphumelele iimbasa ezimbini ezahlukileyo kwi-Consumer Electronics Show ye-Best Wearable kunye ne-Tech yokuTshintsha umhlaba.
9. Umzimba (EChicago, eIllinois); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 25 yezigidi
I-PhysIQ inokufumanisa ezona zinto zincinci zincinci, ezona ziguqukayo kwidatha yomntu kwaye inokwazisa amaqela ononophelo kwiingxaki ezinokubakho kude kube ngaphambi kokuba zivele ngexesha lokujonga rhoqo. Itekhnoloji yenza ukuba oogqirha babone macala onke ngokusebenzisa uhlalutyo oluhlaziyiweyo lomzimba lwe-FDA ukukhupha ukuqonda kwezempilo. Esi siqalo seSixeko saseWindy sisebenzisa isoftware eyayiyilelwe ukulandela umkhondo idatha kwiinjini zejet nakwizityalo zamandla enyukliya, apho ukuphambuka okuncinci kokusebenza kunokubangela ingozi enkulu. Ngoku, i-PhysIQ ithatha indlela efanayo yokulinganisa ukusebenza kwaye iyisebenzise emzimbeni womntu; ilandelela idatha ejikeleze iwotshi ukuze ibambe isingqisho somzimba somguli kunye neetempos kwaye ipakishe idatha kwizinto ezicocekileyo, ezetyisayo zamaqela ezonyango kwilizwe liphela. Njengongeniso oluninzi kuluhlu lwalo nyaka, iFizII yimveliso yedolophu yedolophu yaseChicago. I-PhysIQ esekwe eChicago isebenzisa itekhnoloji eyilelwe kwasekuqaleni iinjini zejet kunye nezityalo zamandla ukufaka idatha yezempilo yoluntu.Ngokunyanisekileyo kwe-PhysIQ
10. Pops! Seswekile (Oak Park Heights, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 8 yezigidi
USiri no-Alexa: Dibana noMina-wonke umhlobo omtsha wesifo seswekile kunye nenye yeemveliso zamva nje ezivela ePops esekwe eMinnesota! Isifo seswekile, inkampani ephakamisa icala labathengi malunga ne-200 yezigidi zeedola kwimarike yeswekile. U-CEO u-Lonny Stormo ukholelwa ukuba ngelixa ukuzikhathalela kufaneleke kuqala, amaxesha amaninzi ubomi buba sendleleni, yiyo loo nto indlela yakhe yokuthenga abathengi kulawulo lweswekile egxile kumaqonga afana ne-Mina anokuthi angenelele kwaye abeke iliso elibalulekileyo egameni lesigulana . UMina wathumela isilumkiso kumfazi wam xa iswekile esegazini lam ifunda ama-60. Wakwazi ukunxibelelana nam kunye nogqirha wam kwangoko kwaye waqinisekisa ukuba siyisombulula le meko ngokukhawuleza, uStormo wabalisa kwi-Braganca. UMina undinceda ukuba ndibenesifo seswekile, kwaye ndingavumeli isifo seswekile sibe sesam.
I-Mina liqonga lolawulo lwenkathalelo engapheliyo ekulandeleleni ulawulo lwempilo kubantu abaneswekile kwaye ihlala ihleli; ukufikeleleka okusekwe kwilifu kuthetha ukuba iqela lenkxaso lomntu, ukusuka kubathandekayo ukuya koogqirha, unokukwaziswa kwangoko malunga nengxaki enokubakho ngokufumana isilumkiso esivela kuMina.
Ukwenza lula ishishini lolawulo lwesifo seswekile yindawo enkulu ekugxilwe kuyo kuzo zombini ukhathalelo lwempilo.
Pops! Isifo seswekile sizisa uMina kwindawo yentengiso ukunceda abantu abanesifo seswekile balawule ubomi babo.Ngobubele bePops! Seswekile
I-Stormo, i-alt Medtronic, iya kukhaba umjikelo omtsha wokunyusa imali kwiNgqungquthela yezeMpilo yeJP Morgan kulo nyaka, kwaye ikhadi lakhe lokudanisa ligcwalisa ngokukhawuleza. Sibe nethamsanqa lokuza kwintengiso njengokuba umdla ekunyamekeleni kunye nolawulo lweswekile ukufuphi okanye phezulu kuluhlu lokuthenga lwee-VCs ezininzi zempilo yedijithali, ezibonelelwe yiStormo.
Shumi elinanye. DispatchHealth (IDenver, iColorado); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 68 yezigidi
Kubonakala ngathi ziingcinga ezikrelekrele: Ngaba ufuna ukukhwela? Yibonge i-Uber. Ulambile? IPing GrubHub. Kodwa uza kuthini xa ufuna ugqirha? DispatchHealth esekwe eColorado ibonakalisa ukuba ngetekhnoloji, ukhathalelo lwempilo oluyimfuneko emnyango wakho akunakwenzeka kuphela, kodwa kunye nemodeli yeshishini esebenzayo. Kwiimpompo ezimbalwa, ngokusebenzisa i-Disptach app, iqela lezonyango eliqinisekisiweyo lebhodi liya kuza ekhayeni lakho, eofisini okanye naphi na apho ufuna khona, lixhotyiswe ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokujongana nalo naluphi na ukhathalelo olukhethekileyo onokulufuna.
Njengokuba ukufikelela kukhathalelo lonyango kusiba kukujolisa ngakumbi kubathengi, kubonakala ngathi uninzi lwabatyali mali bezobuchwephesha kwezempilo bakholelwa ukuba ukutyelelwa kumaziko emveli okhathalelo lwezempilo ngezitena nodaka kuya kugcinelwa kuphela iimeko ezinzima. DispatchHealth kukubheja okukhulu ekubeni iinkonzo zempilo ezifunekayo ekhaya ziya kuba yinxalenye yekamva lokhathalelo lokuqala.Ngokunyanisekileyo kweDispatchHealth
12. Funda Ukuphila (IMinneapolis, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 9 yezigidi
Akukho kunqongophala kweziqalo ezifumana inkxaso-mali ezijolise ekubambeni intsimi yazo kwindawo eshushu ebomvu yonyango yengqondo yengqondo. Izicwangciso zezempilo, abaqeshi abakhulu neeyunivesithi, oorhulumente kunye namasebe omkhosi, kunye ne-VA, phakathi kwabanye abaninzi, banomdla wokubonelela nge-CBT ye-Intanethi (unyango lokuziphatha kwengqondo) kumalungu abo, abafundi kunye nabasebenzi.
Kutshanje Iprofayili yokujonga indawo yempilo yengqondo yedijithali , Funda ngokuPhila kwaqaqanjiswa njengomnye wabenzi bezinto ezintsha kwicandelo, etyhola ishishini ukuba lisebenzise iindlela ezinobuzaza, ezinobungqina bonyango lwedijithali yonyango ngokuchasene nabaninzi abakhuphisana nabo, abathi, ngaphandle kokunyusa imali eninzi, Kubonakala ngathi bayadlala kwizinto ezinokuthi zichazwe kakuhle njengezinto ezahlukeneyo zengqondo yengqondo. I-2019 ibingunyaka wesibhengezo esekwe eMinneapolis Funda ngokuPhila, amanqaku e-inki kwiiakhawunti ezintsha, kubandakanya ukusebenzisana IBlue Cross Blue Shield yaseMassachusetts ,kunye nokuhlawula ityala elinqwenelekayo kwi-Express Scripts ' Ifomula yempilo yedijithali .
13. Indlela yokuphila (ISt. Louis Park, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 36 yezigidi
Ukhathalelo lwabadala okanye lwezonyango luphakathi kwamacandelo akhula ngokukhawuleza kwezempilo. Phantse I-740 yezigidi zeemarike zokunyamekela abantu abadala ivuthiwe kukuphazamiseka, kwaye i-Lifesprk esekwe eMinnesota ichaze indawo yokuyalela ukwenza uxanduva kweli candelo litshisayo lendawo yokhathalelo lwempilo. Eyona nto iphambili kuyo, i-Lifesprk imalunga nokuzisa uluhlu olubanzi lweenkonzo zenkxaso kwizigulana ezisebekhulile, ukuzixhobisa kunye neentsapho zazo ukuba zihlale zilawula kwaye zibenza bakwazi ukuphila ubomi ababufunayo kwaye bathathe umhlala phantsi ngokwemigaqo yabo. Kodwa ngasemva kwemiboniso-kwaye yiyo loo nto umsunguli kunye ne-CEO u-Joel Theisen eye waba yinto yeqonga eliphambili kwindawo yentengiso yezononophelo oluphezulu-yidatha.
I-Lifesprk iqokelela kwaye idibanise idatha ekhe yathunyelwa nge-imeyile, okanye engafakwanga kwaphela, ukuphuhlisa iRekhodi yoBomi ye-elektroniki, okanye i-ELR, iqonga elitsha elinokuguqula ukhathalelo lwabadala njenge Isiphelo seBloomberg yayikwiimarike zemali zehlabathi. Ngokudibanisa iiseti zedatha ezinkulu ezijolise emntwini, i-Lifesprk inokuchonga ngokukhawuleza kwaye icebise ngeenkonzo ezenzelwe wena ngexabiso elifanelekileyo lokuhlangabezana neemfuno nakweyiphi na imeko yobomi enokuthi ihlangane nomntu omkhulu. Iziphumo zibude, ubomi obugcweleyo, iindleko ezisezantsi kunye nenkampani ehamba phambili.
14. IDx (Iowa City, Iowa); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 55 yezigidi
Amehlo abaluleke kakhulu emasangweni ethu engqondo, emzimbeni kwaye, abanye basenokuthi, umphefumlo. Imveliso yeflegi ye-IDx, i-IDx-DR, yeyokuzimela evunyiweyo yokuqala ye-FDA ubukrelekrele bokuzenzela (AI) iqonga elisebenzisa isoftware ukuhlalutya imifanekiso ukusuka kwikhamera enamandla aphezulu kubungqina bezilonda ze-retinal ezinxulunyaniswa nokuqala kwangoko kobumfama kwisifo seswekile. Eyilwe ngugqirha wamehlo osuka eNetherlands owafudukela eMidwest ukuya kwenza amayeza kwiYunivesithi yaseIowa, esi siqalo siguqula ukufunyanwa kwangoko kobumfama, isifo esiqhelekileyo esinxulunyaniswa nesifo seswekile, esihlasela malunga ne-8.5% yabantu behlabathi. I-IDx yinkampani yokuqonda isifo ye-AI ejonge ngamehlo ukuze iqale entlokweni yokungaboni kunye nokufumanisa isifo.Ngokunyanisekileyo kwe-IDx
I-sauce eyimfihlo yenkampani kukukwazi kwayo ukukala ngokuphepha isidingo seugqirha ukutolika iziphumo zokuvavanywa kwe-retina, okwenza ukuba idatha ifumaneke ngokubanzi ngababoneleli bezempilo abangaqhelekanga kukhathalelo lwamehlo.
Shumi elinantlanu. Isera Prognostics (ISalt Lake City, eUtah); Imali Ephakanyisiweyo: $ 151 yezigidi
Oomama abaza kubakho kunye noogqirha baya ngokuya bajikela kwi-Sera Prognostics ye-Utahukuxelwa kwangaphambili komngcipheko womntu ngamnye kumfazi ukuzalwa ngaphambi kwexesha kunye nezinye iingxaki ezinxulumene nokukhulelwa. Inkampani ngumtshintshi wokwenyani womdlalo, sele iphuhlise iseti yovavanyo lokuqonda olwenzelwe ukunika abasetyhini kunye noogqirha babo ixesha elifunekayo lokwenza unyango kunye nezicwangciso zokhathalelo.Imveliso yenkampani ephambili, uvavanyo lwegazi lwe-PreTRM, kuphela kwento eyaziwayo ekliniki efumaneka kuluntu ngokubanzi.
UGqirha Garrett Lam, igosa lonyango eliyintloko le-Sera, uphawule, Ndibe nesabelo kwintlungu yentliziyo nakwintlekele ebangelwe ziingxaki zokukhulelwa kuwo wonke umsebenzi wam. Umsebenzi wethu eSera, wokuchonga umngcipheko kwangaphambi kokukhulelwa, uya kunceda oogqirha, ukubachaphazela ngokuqinisekileyo oomama kwaye kuncede impilo yabantwana abasandul 'ukuzalwa ukwenza umahluko obonakalayo kwihlabathi lethu.
Uluntu lotyalo-mali kukhathalelo lwempilo lubheja kakhulu kwi-Sera ekubeni ngumgangatho wegolide wokufumana umngcipheko kwangoko koomama abakhulelweyo kwayeinkokheli yehlabathi ekuxabiseni koxilongo kwezempilo lwabasetyhini. Njengongeniso oluninzi kuluhlu lwalo nyaka, iSera isombulula iseti ethile yemicimbi-kule meko, ngokuhambisa ulwazi olubalulekileyo kwizigulana nakugqirha-oluza kudlala indima ebanzi ekuphuculeni uqoqosho lwendalo iphela yokhathalelo lwempilo.
16. Umakazi uBertha (UAustin, eTexas); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 22 yezigidi
E-U.S., Kukho amawaka abantu abangenzi nzuzo kunye nabanikezeli benkxaso kwezentlalo abasetelwe ukunceda abo banesidingo, kodwa inyani kukuba ukuhamba kumazantsi entsonkothileyo wombutho wenza nantoni na engenakoyikisa umntu ophakathi osweleyo. Kwabaninzi, into ekufuneka iyinkqubo elula nengqalileyo, ithatha ixesha elininzi, ishiya abaninzi benxunguphele ukuya kwinqanaba lokuncama. Okukwintsusa: abantu abaninzi baseMelika babandezeleka ngokungeyomfuneko ngaphandle kokufunyanwa kwezixhobo ezifikelelekayo ezivela kwimibutho yesisa, kwiiNGOs nakwizinto ezingenzi nzuzo. Ngenisa umakazi uBertha, anIqonga elise-Austinedibanisa abantu abafuna uncedo kunye nabanikezeli benkathalelo yoluntu abaqinisekisiweyo ababakhonzayo.U-Aunt Bertha ngu-Aunt omthandayo onokumthemba, onika amandla isikhombisi selizwe esineenkcukacha ngokubanzi kwimibutho yeenkonzo zentlalo.
Kodwa u-Aunt Bertha ungaphezulu 'kwePhepha eliMthubi' leenkonzo zentlalo; Isizathu sokuba inkampani ibe yinto eyithandayo phakathi kwee-VCs kukukwazi ukungena kwindawo engakhathalelwanga, kodwa ebaluleke kakhulu, kwinkalo yonakekelo lwezempilo, enikezela ngezisombululo kubathengi bezonyango ezinempawu eziphambili njenge-EHR (iRekhodi yeSibhedlele se-Elektroniki) ukudityaniswa kunye ukunika amaqela okhathalelo umbono opheleleyo ngakumbi wemeko yenkxaso yesigulana kwihlabathi liphela.
17. Ukhathalelo lwezeMpilo (ENashville, eTennessee); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 26 yezigidi
Abagqatswa baka-Mongameli kwindlela yomkhankaso bahlala bethetha ngesibetho esibalekayo sesizwe esibalekayo. NgokweSaveyi kaZwelonke ka-2018 yoSetyenziso lweziyobisi kunye neMpilo, ngaphezulu kwezigidi ezili-10 zabantu baseMelika abaneminyaka eli-12 nangaphezulu besebenzisa gwenxa ii-opioids ngo-2018, kwaye ifuthe kuluntu kwilizwe liphela libuhlungu kakhulu. Isiseko saseNashvilleI-AxialHealthcare iyasebenzisana nezibhedlele kunye nabagcini kwilizwe lonke ukulwa ukuphathwa gadalala kwe-opioid ngu-lukuhlala ucinga ngobuchwephesha bokuchonga abaguli abasemngciphekweni, ukuthintela ukunyuka kweemeko zabo kunye nokuxhasa ukubhaliswa okufanelekileyo kunyango kunye nokubambelela kunyango. I-Axial iphambili kwizifo ezibulalayo (phantse ama-130 aseMelika asweleka mihla le ngenxa yokuxhatshazwa okunxulumene ne-opioid) kunye nendawo yentengiso enkulu; Kunyaka ophelileyo, ngaphezulu kwe-200 yezigidigidi zeedola ezichithwe kulwa ubhubhane we-opioid e-U.S.
Indlela ye-Axial icaciswe kwindlela ephezulu yokuthinta, esekwe kuluntu ehambisa iimetri zeklinikhi kunye neziphumo zezemali ngokulawula iindleko zokhathalelo ngelixa lixhasa iinzame zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwizigulana ezinesifo sokusetyenziswa kweopioid.I-CEO esandul 'ukwenziwa uCarter Paine-owayesakuba ngumongameli kunye ne-COO yomphathi wokhathalelo lwexabiso Impilo , ozisa ulwazi olufanelekileyo lomsebenzi ukusuka kwixesha lakhe esebenza neenkampani kwi-IT kunye neenkonzo zempilo kwihlabathi-uya kujonga ukwandisa ukufikelela kweqonga le-Axial, ngoku egubungela phantse abantu abazizigidi ezithathu.
18. Yenza ngcono (IMinneapolis, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 6 yezigidi
Nangona kungekho mntu unokufumana iiteyiphu zokurekhoda, isicaphulo esithi, 'Ukutya makube liyeza lakho, kwaye iyeza makube kukutya kwakho kudume ngokubalelwa kugqirha wamandulo wamaGrike uHippocrates-owayehlala ethathwa njengoyise wawo onke amayeza. Nokuba uHippocrates uyithethile okanye hayi, kuya kucaca gca ukuba ukutya kwethu kwenkulungwane yama-21 yeyona nto ingunobangela wemicimbi yezempilo yanamhlanje, kwaye iBenovate yenye yezona zinto ziphambili ekuphazamiseni ukutya njengokuhamba kwamayeza, ukuxuba isiyobisi yobuchwephesha, i-AI, isondlo kunye nolwazi loshishino lonyango lokuthengisa imveliso yabo ye-Gx (i-riff off the pharmaceutical 'Rx' kunye 'G' yokutya).
I-Benovate isempilweni yi-2.0. Uhlelo lwayo lwe-Gx lwaphula umhlaba omtsha ngokwenza yonke inkqubo yezempilo, ukusuka kugqirha ukuya kumnikezeli weinshurensi, ukumisela nokubuyisela ukutya kwansuku zonke, njengekhukhamba, egcwele izondlo ezixabisekileyo. Ngaphantsi kwesikhokelo esinamava se-CEO yenkampani uMark Walinske, igqala elineminyaka engama-30 lendawo yokhathalelo lwempilo, imveliso kaGenovate yeGx ijolise ekuguquleni igrosari yendawo yakho ibe yikhemesti yaselumelwaneni. Imveliso yeBenovate's Gx ijolise ekuguqulweni kwemveliso yemihla ngemihla, njengeekomkomere ezigcwele izondlo, iidiliya kunye neeavokhado, zibe ngamayeza amiselweyo, abuyiswayo.Ngokunyanisekileyo kweBenovate
19. Unyango lweAbilitech (St. Paul, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 9 yezigidi
Entsha kwi I-7.4 yezigidi zeedola Umjikelo wezemali , I-Abilitech yezoNyango yaseMinnesota inomoya ovuthuzayo we-arctic ngasemva kwayo. Umphathi omkhulu u-Angie Conley uqokelele amabhaso amaninzi oshishino kunyaka ophelileyo kangangokuba usenokuphelelwa ligumbi elilelakhe phezu kwengubo yakhe yomlilo. Kwaye yinto entle leyo kuba i-Abilitech yinkampani enentliziyo eninzi ukongeza ekusombululeni umceli-mngeni wezempilo onobuzaza kakhulu-ukwenza ukuba abo baneemeko zelungu lomzimba eliphezulu basebenze ngokuzimeleyo.
Imveliso yokuqala yenkampani, i-Abilitech Assist, sisixhobo esinamandla esisebenza ngokubonelela ngoncedo olusebenzayo kunye nenkxaso kwingqiniba nasemagxeni, siphucula ubomi babo bachaphazeleka yi-muscular dystrophy, multiple sclerosis, ukulimala komqolo kwaye, kwezinye iimeko, ezo abaye bahlaselwa yistroke. I-Abilitech yenza abo basokolayo ukwehla kwemisipha okanye i-neural babuyele ekwenzeni izinto abazithandayo.Ngobubele buka-Abilitech
Kwi-2020, inkampani ikulungele ukufumana ubhaliso lwe-FDA, yenza izifundo zeklinikhi kwaye iqale ukurhweba ngokubanzi kwe-Abilitech ™ Nceda, eyenze ii-VCs ezininzi kwingqungquthela yalo nyaka eSan Francisco zinomdla wokufumana ixesha elisemgangathweni noConley. Umbonisi asinguye kuphela umpapasho oye waqonda amandla ale nkampani etshintsha umdlalo; Sele befumene ukwamkelwa njengesiQaliso esiPhezulu seziNyango ezili-10 elizweni ngokuthi Umbono weTechnical Medical Iphephancwadi, iNkampani ePhakamileyo ethembisayo ye-Rice Alliance, kwaye yafunyanwa njengesixhobo sokuQala esiPhezulu seziNyango ezingama-20 nguMassDevice.
Amashumi amabini. Inkathalo (IBloomington, eMinnesota); Inkunzi iphakanyisiwe: $ 9 yezigidi
Yintoni ubungakanani bebhokisi yesonka, ijongeka ngathi ngumenzi wekofu oyilelwe yiApple kwaye uhambisa iipilisi? Akukho luvo? Yisixhobo sokunyanga amayeza asekhaya, sixhotyiswe ngeekhamera ezisebenzayo ze-Wi-Fi eziza kwenza ukuba abagcini babukele umakhulu ngexesha lokwenyani bangaphathi kuphela ipakethi yeepilisi esele zilayishiwe (ngexesha elifanelekileyo), kodwa baginye nabo (ergo ikhamera yesibini!) Ukuqinisekisa ukuba akukho nanye efihla ipilisi phantsi kobuqhetseba bolwimi. Itekhnoloji ye-Ōmcare, eyahlengahlengiswa ukusuka kumsunguli kunye ne-CEO uLisa Lavin owayengumniki-mayeza ophethe izilwanyana zasekhaya, unemishini ebulalayo: ukunciphisa iimpazamo kumayeza kunye nokunyusa ukubambelela kuluntu lwabantu abadala.
Unyango lwe-servesmcare lisebenza ngobuso ukujongana nokunganyanzelisi amayeza.Ngokunyanisekileyo kwe-caremcare
Ukunyamekelwa kwe-Ōmcare kutshanje kunikwe amandla amakhulu ngokongezwa kwegqala lexesha elide lokunyamekela impilo uJeannine Rivet kwibhodi yakhe. Rivet, owayesakuba ngusekela-mongameli wesigqebaIqela le-UnitedHealth, Enye yezona nkampani zinkulu zorhwebo ezikhutshelwa esidlangalaleni, ikholelwa ekubeni ukhathalelo olukude luyindlela yexesha elizayo kwaye iinkampani ezinje nge-,mcare, ezenza ukuba abaguli abalupheleyo bahlale ngokuzimela ixesha elide, banengqiqo kungekuphela ngokwezoqoqosho, kodwa ngokuhlangabezana neemfuno zabantu abadala abanqwenela ukuguga endaweni.
Ndiqale umsebenzi wam kukhathalelo lwempilo njengomongikazi, kwaye ke ndiyazazi ngokwam imiceli mngeni kunye nezithintelo ezibekwe kubanonopheli, ucacisile uRivet. Nangona kumanqanaba okuqala, i-caremcare inokubanakho ukuguqula amayeza anganyanzelwanga phakathi kwabantu abadala kunye nabanye abazabalazela ukulawula iimeko zempilo ezingapheliyo okanye ezinzima.
I-caremcare yeKhaya lezeMpilo laseKhaya lisebenzisa imiyalezo yeaudiyo kunye nemiboniso, evumela abanonopheli kunye namaqela okhathalelo ukuba abeke esweni ukuthotyelwa kwamayeza, kwaye ukupakishwa kwayo kwethamo elininzi kuyilelwe ngokukodwa ngokusebenzisana neehemesti ukuze ukusetyenziswa komthamo ochanekileyo kungabi ngumba.
Ukufumana iidayimani kwiRough
Ingqungquthela yonyaka ye-JP Morgan Healthcare Conference ibeka ithoni kulo lonke unyaka xa isiza kwezona zinto zihamba phambili kushishino lokhathalelo lwempilo lwehlabathi. Kunyaka ophelileyo, ukufunyanwa kwabasunguli bezempilo abanesibindi abavela kwiindawo ezinje ngeSt Louis, eMissouri naseColumbus, eOhio, umzekelo, ayizange ibothuse abangaphakathi kumzi mveliso, kodwa kwabonakala ngathi babamba amanye amajelo osasazo oselunxwemeni abaphefumla kuphela kuloo moya unqabileyo weSilicon Valley ngothuko. Kodwa kulo nyaka, ii-VCs, i-Big Pharma, ukhathalelo lwempilo olukhulu kunye namajelo osasazo ezoshishino ayazi kakuhle ukuba ezinye zeenkwenkwezi ezinkulu kwinkomfa yalo nyaka ziya kuvela 'kwilizwe elingaphezulu.'
U-Aly Lovett, iqabane elikwiRadio Capital yaseNew York esekwe kwisiXeko, indawo yokulingana yokukhula enobukho obomeleleyo kwindawo yesoftware yokhathalelo lwempilo, yamkela ngokuphandle ukujonga amathuba otyalo-mali kwizixeko ezijongwa kakhulu zii-VCs zemveli. Isiseko solwazi esifunekayo sokwakha inkampani ekhokelayo yetekhnoloji ayisagxili kwizixeko nje ezimbalwa, kwaye ikomkhulu liyaqala ukulandela loo mkhwa. Amaxabiso asezantsi, umgangatho ophezulu wokuphila kunye nokufikelela okuthe kratya kwitalente enkulu kwenza ezi zixeko zincinci zibe ziindawo ezinqweneleka kakhulu ukuqala ishishini, utshilo uLovett. Zininzi iingelosi ezimangalisayo kunye nengxowa-mali yembewu kule mimandla enokunceda ekuqaliseni iinkampani, kwaye sicinga ukuba kukho ithuba lokuba iRadian ibonelele ngokulingana kokukhula ukuze ixhase la mashishini kwisigaba esilandelayo sokukhula.
Kodwa ukuba uLovett ebambelele kwinto eyimfihlo, kubonakala ngathi imfihlo yakhe ngoku isekuhleni; Inkunzi ekude ikude ikhangela i entsha, entsha kubuchwephesha bezempilo obuvela kwilizwe eliphuma kubhabho, kwaye uninzi luzakusebenzisa i-JP Morgan confab njengethuba lokubazi.
Nokuba baphi na ekhaya.
'Ezikhethekileyo ezinzulwini zobusuku' Ngaba Cotha njengeNtshulwane
Le Akhawunti ye-Twitter yeParody icinga ukuba yintoni uHillary Clinton angayithumela njengoMongameli
Umgqatswa woSihlalo we-DNC uTom Perez uyavuma ukuba iiPrimaries zeDemokhrasi zazinomngcipheko
Umceli mngeni wokuGaya iVoti yeLatino
amabali avela kumathambo e-crypt
Ungayifumana njani imvelaphi yokujonga simahla
Eyona ndawo yokwenene yokubambisa imali
Ukalwe phezulu phantsi kwenkqubo yokucoca